Infographic: Beingbụ onye ejikọtara site na Mobile-Real Life Scenarios
Kuno Creative weputara ihe infographic kere site na ohuru Pew Internet mobile nnyocha.
Omenala ohuru nke ozi ozigbo site na mgbasa ozi, ngwa na ihe nchọgharị weebụ na-enye ndị mmadụ ohere ịnweta ozi ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ, na Pew Research kachasị ọhụrụ gosipụtara ọkụ ozugbo na nke ahụ. Ọ na-anọchikwa nnukwu ohere maka ndị na-ere ahịa inbound.
Ihe omuma ahu gosiputara ugbua omenala na teknụzụ nke ugbua na ntinye aka na ichikota ihe omuma. Ọ kwesịkwara ịbụ ihe mgbaama nye ndị na - ere ahịa na azụmaahịa mkpanaka abụghị nhọrọ ọzọ, mana ọ dị mkpa iji ruo ndị ejikọrọ na ekwentị. Ma ọ bụ idozi nsogbu, ịhọrọ ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ma ọ bụ na-elekọta mmadụ na Facebook, ọtụtụ ndị mmadụ na-adabere na ekwentị ha.
Tags: Infographics AhịaMobile na Mbadamba ụrọ
Nkwụ ụgwọ ekwentị - Ahịa Aka Gị
Ihe niile gbasara teknụzụ
Mee 13, 2012 na 1: 17 AM
Ọhụrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-emepe ụzọ ọhụrụ nke ịzụ ahịa nke anyị nwere ike isi gbasaa ozi ngwaahịa anyị site na mgbasa ozi mmekọrịta na ọsọ ọsọ dị oke egwu.